Dowladda Uganda oo ka hadashay Qabashada Wakiilkii Argagixisada Al Shabaab ee Dalkaas oo la qabtay – Radio Muqdisho
Dowladda Uganda ayaa sheegtay iney gacanta ku dhigtay laba qofood oo mid ka mid ah uu ahaa wakiilka Al shabaab ee dalka Uganada.
Afhayeen u hadlay booliiska Ugada ayaa xusay in labada ruux ee la qabtay uu mid ka mid ah yahay Soomaali, kaasoo sida uu tilmaamay Shabaab wakiil uga ahaa dalka Uganda.
Booliiska ayaa baaritaano ku haya ninkaasi Soomaaliga ah oo laga soo qabtay duleedka magaalada Kambala, xilli uu sawirro ka qaadanayay iskuul ay dhigtaan caruur farabadan, waxaana qabashadiisa fududeeyay ardayda oo ku wargelisay boolisk, kadib marki ay ka shakiyeen.
Afhayeenku ma uusan sheegin magaca ninkaasi iyo macluumaad dheeraad ah oo intaasi dhaafsiisan, inkastoo ay socdaan baartitaano la xiriira arintaasi.
Al shabaab ayaa khamiistii la soo dhaafay weeraray jaamacadda Gaarisa halkaasoo ay ku laayeen 147 ka mid ah ardaydi wax ka baraneysay Jaamacaddaasi.
Dowladda Kenya oo shaacisay magacyada dadkii fududeeyay weerarkii jaamacadda Gaarisa